Talooyin iyo qalab | Dina Rättigheter
Talooyin iyo qalab
Sidan u dhaqan haddii lagu istaajiyo:
Inta aadan tusin kaarkaada aqoonsiga, haddiiba aad dooneyso inaad tusiso, weydii boliiska sharciga uu cuskanayo.
Ka codso boliiska inuu kuu sharaxao sababta iyo ujeedada ay u go’aamiyeen iney baaraan aqoonsigaaga. Maadaama ay wanaagsan tahay inaad boliiska ka hesho sharaxaada koowaad si aad haddii aad ashtakooneyso ugu qorto, maadaama ay dhici karto iney dib u bedelaan warbixinta.
Haddii aad heleyso waqti/fursad isku day inaad telefoonka ku duubto waxa ay sheegayaan.
Qaado magaca boliiska iyo xilkiisa.
Sababaha boliiska xaqa u siinayo iney dadka ku sameeyaan baaritaan aqoonsi?
Marka uu jiro shaki danbi
Sida sharciga nidaamku qabo waa mamnuuc waxeyna go’aamineysaa in la ciqaabo/ganaaxo qofka aan bixin lacagta safarka. Boliiska wuxuu markaa xaq u leeyahay inuu aqoonsi weydiiyo qofka aan lacagta bixin.
Sida sharciga nidaamku qabo waa mamnuuc in laga gudbo isbaarada meesha tareenka loo galo (haddii aad joogto Stockholm) adigoon wadan caddeyn safar oo shaqeyneysa. Qofka ku xad-gudba sharciga nidaamka oo gudaha u gala meesha isbaarada tareenka isagoon wadan caddeyn safar ee shaqeyneysa waxey tahay marka shaqaaluhu u sheego iney qasab ku tahay inuu ka baxo meesha shirkada gaadiidka ama gaadiidka.
Boliiska ama waardiyaha nidaamka wuu kuu diidi karaa ama kaa saari karaa sida sharciga nidaamku qabo haddii qofka aad ka bixi weyso meesha gaadiid ee shirkadda kadib marka shaqaaluhu kuu sheego taa.
Qofka gala meeshaa gudaha isbaarada ee tareenka isaga oo aan heysan caddeyn safar ee shaqeyneysa waxa lagu xukumi karaa ganaax lacaga, haddii aaney ciqaab adag ee xeerka danbigu jirin.
Haddii ay jirto sabab qaasa ee keeneysa in boliisku u arko in qof aan la garaneyn la raadinayo ama la goobayo
Sida uu qabo sharciga boliiska 14 § wuxuu boliisku xaq u leeyahay haddii ay la kulmaan qof aan la garaneyn haddii ay jirto sabab qaasa ee keeneysa in boliisku u arko in qof aan la garaneyn la raadinayo ama la goobayo iyagoo cuskanaya sharcigaa in xuriyadda laga qaado qofkaa, la qabto si loo ogaado cidda uu yahay, haddii uu diido inuu bixiyo warbixinta aqoonisgiisa ama ay jirto sabab keeneysa in warbixinta uu bixiyey aysan aheyn sax.
In qof laga qaado xoriyad ma dhaceyo oo kaliya marka danbi uu dhaco balse waxa taa la sameyn karaa mararka qof uu hey’adda socdaalka ka gaarto go’aan ama boliisku go’aan ku gaaro in la xabsi lagu hayo qofkaa.
Sababaha qaaska ee loo qaadan karo waxa loola jeedaa sharci ahaan (kuwa loo isticmaali karo in he’ad ama maxkamaduhu u turjumaan sharciga) in qof aanu heysan aqoon isla markaana muuqaalkiisu u eg yahay calaamadaha qofka la baadi goobayo.
Iswiidhen waxa la baadi goobayaa dad ka badan 12 000 sababtoo ah iyagoon ka bixin dalka Iswiidhen kadib markii ay heleen go’aan iney dalka ka baxaan. Markaa waxa boliiska ku adag iney helaan ”sabab qaasa ay ugu qaataan” in qofki la doono ee joogo goob dadweyne uu yahay qof la baadi goobayo ama qof aragtidiisu u eg tahay qof la baadi goobayo.
Haddii ay jirto sabab sal leh ee keenta in boliisku u arko in qof ajnabi ahi aanu xaq u laheyn inuu joogo Iswiidhen ama ay jirto sabab qaasa ee loo baaro
Sida uu qabo sharciga ajnabiga ee 9 kap. 9 § waxa qasab ku ah qofka ajnabiga ee jooga Iswiidhen inuu haddii boliisku weydiiyo dhiibto baasaboor ama ama aqoonsi kale ee muujinaya inuu xaq u leeyahay inuu joogo dalka.
Baaritaanka waxa la sameyn karaa oo kaliya haddii ay jirto sabab loogu arki karo in qofka ajnabiga ahi aanu heysan xaqa inuu joogo Iswiidhen ama iney jirto sabab qaasa ee loo baaro.
Ajnabi = waa qof aan heysan shalasho iswiidhish.
Sharciga loolama jeedo in qofku qasab ku tahay inuu mar kasta uu wato baasaboor xiliga uu joogo Iswiidhen.
Ashkato ka gudbinta hey’ad (JO-anmälan)
Sida ugu sahlan ee aad ashkato hey’ad u sameyso waa adigoo isticmaala foomka Jos bogga internetka (www.jo.se/sv/JO-anmalan/). Waxa qofka ashkatada gudbinaya looga baahan yahay warbixintiisa shaqsi, waanu inuusan aheyn qofka dhibka loo geystay. Qofku wuxuu ashkato gudbin karaa isagoo qarsoon balse waxey taa u badan tahay inaan waxba laga qaban.
Sidan u samee ashkatada:
1. Qofka dacwadda laga gudbinayo, hey’adda iyo/ama shaqaalaha loo arko inuu si qalada u dhaqmay:
Halkan waxad ku qoreysaa tusaale ahaan boliiska Göteborg iyo magaca qofka boliiska ee la dacweeynayo, haddii aad heyso magaca.
2. Si faah-faahsan u sharax inti aad karto adigoo sheegaya dhamaan wixi aan ku dhaleeceyneyso boliiska sida adigoo caadi isaga socda, una socda inaad la kulanto saaxiib/u socdo iskuulka ama shaqada iwm. Wada hadalki idin dhexmarary adiga iyo boliiska sharax: ma waxey kugu yiraahdeen wax meel ka dhaca, cunsiriyeen, takoor, wax miyey ka sheegeen qof aad la socotay ama meesha aad joogtay? Waa muhim inaad sheegto wax kasta maadaama boliisku sheekadiisa dib ka bedeli karo.
3. Sidee baad u aragtaa in hey’addu/shaqaalaha uu qalad ugu dhaqmay?
Sidan ayaad uga jawaabi kartaa su’aasha:
Sida uu qabo sharciga ajnabiga waa in boliisku uu wataa sabab sal leh haddii uu ka shakiyo inaanu qofku xaq u laheyn inuu joogo Iswiidhen ama haddii ay jirto sabab qaasa ee keeneysa in la baaro qofka oo la weydiiyo aqoonsi. Mida kale si cad ayey ugu qoran tahay sharciga ajnabiga in boliisku aanu ku andocoon karin inuu baarayo qofka iyadoo loo eegayo muuqiisa oo u muuqda ajnabi iyo iney taasi aheyn wax ku filan oo keeni kara in qofka wadada lagu joojiyo iyadoo la baarayo. Xataa xeerka gudiga qaran ee boliiska (RPSFS 2011:4 FAP 273-1) wuxuu sheegayaa in baaritaanka ajnabiga ee gudaha dalka aan la sameyn karin iyadoo loo eegayo oo kaliya qofka muuqiisa oo u muuqda ajnabi ama qofka afka uu ku hadlayo ama magaciisa.
Waxan u arkaa inuu boliisku u dhaqmay qalad isagoo ku xad-gudbay sharciga ajnabiga xeerkiisa iyo qawaaniintiisa ee baaritaanka dalka gudihiisa ee ajnabiga. Tani kadib markuu boliisku i joojiyey/ama joojiyey qofka aad ashkatada u gudbineyso/ina weydiiyey/ama weydiiyey qofka aqoonsi isagoo ka anba qaadaya oo kaliya… muuqeyga/afka sheeg takoorka/arin aan sabab ku dhisneyn. Ma jirto sabab sal leh ama sabab in la ii arko inaan/in qofku aanu xaq u laheyn inaan/inuu joogo dalka – ma aysan jirin sabab qaasa ee keeneysay in la i baaro. Tani waxa ugu wacnaa in la ii raadsaday madaama aan ajnabi ahay, taasoo ah takoor sharciga ka soo horjeedda. Waxan/waxeynu dooneynaa in JO ay baarto sababta boliiska ee arintan, iyo guud ahaan iyadoo la eegayo baaritaanka gudaha ee ajnabiga, ugu arkay inaan buuxiyey sabab sal leh. Waxan u arkaa in JO uu baaro hababka boliisku isticmaalo marka loo eego baaritaanka gudaha iyo iney waafaqsan tahay sharciga marka la eego arinteyda iyo arimaha la midka ah. Waxa ka jira shaki weyn arintan – boliiska kala duwan waxey sharciga u turjumaan una dhaqmaan si kala duwan xiliga ay la hadlayaan warbaahinta. Waxa boliiska iyo dadweynuhuba u baahan yihiin caddeyn sida sharciga yahay.
La xiriir Revajouren (revajouren@gmail.com) haddii aad dooneyso warbixin intaa dheer ee waxa shaqeynaya marka la eego awooda boliiska iney sameeyaan baaritaan aqoonsi iyo fursadaha aad heysato inaad sii wadato keyskaada haddii lagu baaro iyadoo aysan jirin sabab aan caddeyn.